Kwixesha ledijithali, ukuziphatha kuya kuba yinkxalabo ebalulekileyo yokwenza uphando. Oko kukuthi, kwixesha elizayo, siya kulwa ncinane kunye nento enokuyenza kunye nokunye okufuneka kwenziwe. Njengoko oko kwenzeka, ndiyalindela ukuba iindlela ezisisiseko-siseko ezisetyenziselwa izenzululwazi zentlalo kunye neendlela ezihambelanayo nezenzululwazi zedatha ziza kuguquka kwinto enjengeemigaqo-siseko echazwe kwisahluko 6. Ndikulindela ukuba njengoko imigaqo iya kuba yinkxalabo, iya zikhule njengesihloko sophando lweendlela. Ngendlela efanayo abaphandi bezenzo ngoku bachitha ixesha kunye namandla ukuphuhlisa iindlela ezintsha ezenza ukuba uqikelelo oluncinci kwaye luchaneke ngakumbi, ndilindele ukuba siza kusebenza nokuphuhlisa iindlela eziphathekayo ngokwemigaqo. Olu tshintsho luya kwenzeka kungekhona nje kuba abaphandi banenkathalo malunga nokuziphatha njengophelo, kodwa kuba banenkathalo malunga nokuziphatha njengendlela yokuqhuba uphando loluntu.
Umzekelo walolu hlobo ngumphando wecala lokwahlukana (Dwork 2008) . Khawucinge ukuba, umzekelo, isibhedlele sineengxelo ecacileyo zempilo kwaye abaphandi bafuna ukuqonda iipatheni kule data. Izilungiso ezizimeleyo ezizimeleyo zivumela abaphandi ukuba bafunde ngamaphetheni amaninzi (umz., Abantu ababhemayo banokuthi banomdlavuza) ngeli xesha banciphisa umngcipheko wokufunda nantoni na malunga neempawu zaso nawuphi na umntu. Ukuphuhliswa kwale mibandela yokugcina ubumfihlo-bucala ibe yindawo esebenzayo yophando; ubona Dwork and Roth (2014) kwinyanga yokwelashwa kwencwadi. Ubumfihlo obunjani ngumzekelo woommandla wophando othabatha umngeni wokuziphatha, ukuguqula ube yiprojekthi yophando, kwaye wenze inkqubela kuyo. Lo mzekelo endicinga ukuba siya kuwubona ngakumbi kwezinye iinkalo zophando loluntu.
Njengoko amandla abaphandi, ngokubambisana ngokubambisana neenkampani kunye noorhulumente, bayaqhubeka bekhula, kuya kuba nzima ukuphepha imiba enxulumene nokuziphatha. Kuye kwakuba ngamava eninzi kwenzululwazi zentlalo kunye nososayensi beenkcukacha bajonga le micimbi yokuziphatha njengemlambo ekufuneka igwenywe. Kodwa, ndicinga ukuba ukuthintela kuya kuqhubeka kunganyanzelwanga njengesicwangciso. Thina, njengomphakathi, sinokujongana nale ngxaki xa sifuna ukungena kunye nokuzibandakanya ngobuchule kunye nemigudu esisenzayo kwezinye iingxaki zophando.